GoEuro: tsvaga uye bhuku matikiti iwe uchichengetedza | IPhone nhau
GoEuro: tsvaga uye bhuku matikiti iwe uchichengetedza
Nguva dzese dzatinoenda kunofamba kuita chero mhando yerwendo, isu tinofanirwa kugadzirira zvinhu zvakawanda: mukwende, mashedhi, matikiti ... Kana tikazviisa pamwechete, kugadzirira rwendo kunogona kunge kuri odyssey, iyo dzimwe nguva inogona kuva nousimbe kana kushatirwa. Asi ko kana tikakanganwa chikamu chegadziriro? Ko kana, nekuwedzera, nekuita kudaro isu tichigona kuzvichengetera imwe mari? Izvi zvinogoneka nekuda GoEuro, chishandiso icho ichagadzirisa kuchengetedzwa kwetikiti chitima, bhazi uye ndege muEurope.
GoEuro inotarisira enzanisa nemitengo yakanakisa saka hatifanirwe kudaro. Izvo chete neizvi tinenge tatove tichichengetedza maminetsi akati wandei, kana maawa, tichienzanisa mitengo dzakasiyana dzatinogona kuwana mumasevhisi akasiyana nemapeji ewebhu Uye ndezvekuti, kana tikaenda kuzororo, chimwe chinhu chakajairika pamazuva atiri, zvirinani kushandisa iyo nguva yekuzorora pane kushushikana, handiti?
GoEuro inoita kuti zvive nyore kwauri kuti utenge matikiti ekufambisa
Kune rimwe divi, sekushandisa kwemidziyo smart iyo, kuchengetera tikiti kwaisave nyore: isu tinongofanirwa kuratidza kwatinoda kubva . Kana imwe sarudzo yasarudzwa, tinogona kusefa mhedzisiro kuitira kuti iunzwe kwatiri zvichienderana nenguva yako yekubva, mutengo wako, kambani inopa sevhisi kana chiteshi chekubva / airport. Kana tawana imwe sarudzo inoenderana nezvatinoda, chatinofanirwa kuita kungopa pa "Reserve" kubhadhara tikiti redu. Nyore here?
GoEuro inoshanda nevanoverengeka vanopa rubatsiro, makambani endege nemakambani emabhazi, pakati pawo ari:
Sezvo zvagara zvichitaurwa, nyaradzo ine mutengo, handiti? Zvakanaka, GoEuro zvakare inayo, kana kwete, zvinoenderana nekuti unoitarisa sei: iri application yemahara iyo iwe yaunogona kurodha pasi kubva kunongedzo panoperera chinyorwa. Uye, kana iwe ukafamba zvakanyanya uye uchitenga matikiti kazhinji, GoEuro chishandiso chakagadzirwa newe mupfungwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » GoEuro: tsvaga uye bhuku matikiti iwe uchichengetedza
Mambokadzi Sarita akadaro
Nei usingave nechokwadi usati waburitsa kunyorera?
Ini ndakaiyedza uye ndikangoibvisa, hapana zvitima kubva kuMadrid kuenda kuBurgos, kune matatu mazuva ese.
Pindura kuna Reina Sarita
Motion Stills, iyo app inonyatso kugadzirisa yako Live Mifananidzo
Facebook Messenger ichawedzera nhaurwa dzakavanzika kuvandudza zvakavanzika